प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न हुने रेशम चौधरी जेल जानु पर्ने Canada Nepal
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न हुने रेशम चौधरी जेल जानु पर्ने
काठमाडौं । संविधान निर्माणको समयमा टीकापुरमा एक एसएसपीसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान जाने गरी घटना भयो । सो घटनामा संलग्न भएको अभियोग पुष्टि गर्दै अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । चौधरीबाहेक अरु पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आए ।
अहिले रेशम चौधरीको विषयलाई जनता समाजवादी पार्टीले एकाएक चर्चामा ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग सहित जनता समाजवादी पार्टीले अहिले सरकारसंग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । अहिलेको सरकारलाई जसपाको समर्थन चाहिएको छ, जसका लागि बार्गेनिङ चलिरहेको हाे । जसपाका अन्य मागहरु भए पनि रेशम चौधरीको रिहालाई मुख्य माग भनि अघि सारेको छ ।
सरकारले जसपालाई केहि मुख्य मन्त्रालय सहित उपप्रधानमन्त्रीको पद समेत दिने सहमति गरे पनि रेशम चौधरीको रिहा बारे स्पष्ट हुन सकेको छैन । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग आए संगै अहिले विभिन्न टिप्पणीहरु हुन थालेको छ । अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको व्यक्तिलाई रिहा गर्न हुने कि नहुने भन्नेमा बहस समेत चल्न थालेको छ ।
यहि विषयमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भने, "पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आन्दोलनको नाममा १७ हजार मानिसको ज्यान लिएका छन्, जसमा कयौं हजार सुरक्षाकर्मी समेत रहेका छन् । तर वहाँले चाँही माफी पाएर प्रधानमन्त्री हुने अनि निर्वाचित रेशम चौधरी चाँही जेल जानुपर्ने ? कानून सबैलाई एउटै हुनुपर्ने होइन ? कि चौधरी भनेर कानून पनि फरक हुने ? रेशम चौधरीको रिहा हुनुपर्ने माग एकदम सहि हो ।"
राजेन्द्र महतोले आफ्नो मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक नै रहेको समेत बताएका छन् । तर रेशम चौधरीको विषयमा स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेका छन् । अहिले ओली सरकार ढाल्न आफूहरुलाई कुनै चाँसो नभएकाले आफ्नो माग पूरा गरे यहि सरकारलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट रुपमा नेता महतोले बताएका छन् ।
चैत्र ३, २०७७ मंगलवार १०:३८:१८ बजे : प्रकाशित